Izindawo eziyisikhombisa ezibalulekile eSan Isidro | Izindaba Zokuhamba
Maria | | Izindlela zokuphunyuka, Yini ongayibona
Njalo ngoMeyi 15, iMadrid igubha imikhosi yaseSan Isidro. Okuqale njengohambo lokuya endaweni yabaphathi bedolobha, njengamanje kungumkhosi othatha cishe isonto lapho isiko lendabuko elixubene nohlelo lwezinto zamasiko nezokungcebeleka ezinemibala ehlukahlukene kakhulu. Izakhamizi zenhlokodolobha zigqoka izingubo zazo ze-chulapos futhi zingena ezitaladini zilungele ukujabulela ngokugcwele lonke uhlelo lomkhosi oluhlanganisa ubungcweti namasiko.
1 Umlando weFiesta de San Isidro
2 Imyuziyamu yaseSan Isidro
3 I-Plaza de la Villa
4 Indawo yaseSan Isidro
5 I-Plaza Mayor
6 Izingadi zeVistillas
7 Ipaki enhle yomhlalaphansi
8 Isikwele Sokuthengisa
Umlando weFiesta de San Isidro
UMeyi yinyanga lapho idolobha laseMadrid ligubha khona imikhosi yalo ukuhlonipha iSan Isidro Labrador, usanta ophethe idolobha kanye nabalimi. Izimangaliso ezingaphezu kwekhulu kuthiwa zivezwa yisibalo sakhe, okunye okuvelele kakhulu yisipho sokuthola amanzi kalula lapho ayentuleka khona.. Eqinisweni, imikhosi yalamaholide kaMeyi igxile ebudlelwaneni obuphakathi kwamanzi nosanta. Lolu hambo lwenzeka ePradera de San Isidro nasemigwaqweni ezungezile, futhi kuyisiko ukuthi ama-chulapos aphuze amanzi ayisimangaliso ageleza evela emthonjeni oseduze kweHermitage yaseSan Isidro.
Leli siko lixubene nalelo lokudla ama-donuts no-lemonade emathafeni aseSan Isidro. Ama-donuts ajwayelekile ongakhetha kuwo yi-'silly '(eneqanda),' uhlu '(olunamaqanda futhi lumbozwe ngoshukela oqandayo), lawo avela eSanta Clara (anongqimba lwe-meringue emhlophe) kanye namaFrance (ane-alimondi ). Ngokuqondene nelemonade, iMadrilenian iletha iwayini, ulamula, ushukela nezithelo eziqoshiwe (imvamisa i-apula).
Imyuziyamu yaseSan Isidro
Ukwazi le mikhosi ethandwa kangaka exhumene nomlando waseMadrid, akukho okungcono kunokuya eSan Isidro Museum uyofunda ngemvelaphi yedolobha nokukhula kwalo kuze kube namuhla. Kukhona umbukiso waphakade kepha, ngaphezu kwalokho, kuhlelwe izingqungquthela nemisebenzi ehlobene namasiko athandwayo enhlokodolobha.
EMnyuziyamu wasePrado ungathola imidwebo edumile lapho uFrancisco de Goya amele khona, emuva ngekhulu le-XNUMX, ukuthi imikhosi yaseSan Isidro yayihlala kanjani eMadrid. Kuyathakazelisa ukubona ukuthi kwenziwa kanjani ngendlela ehluke kakhulu kunanamuhla, yize kunjalo ngomdlandla ofanayo.
I-Plaza de la Villa
IPlaza de la Villa ingesinye sezakhiwo ezinhle kakhulu ezigcinwe kahle eMadrid. Itholakala esikhungweni esinomlando, eduze nasePuerta del Sol futhi ibiyisihlalo soMkhandlu Wedolobha wenhlokodolobha. Yilapho imikhosi yaseSan Isidro iqala khona, ngoba isimemezelo sokuvula imikhosi sinikezwa minyaka yonke kusuka kuvulandi waso, okuthe, ngaphandle, uhlala njalo ngoMeyi 14.
Kwakungesinye sezikhungo eziyinhloko zeMadrid yangenkathi ephakathi. Kunezakhiwo ezintathu zenani elikhulu lomlando nobuciko: iCasa y Torre de los Lujanes (ikhulu le-1425), iCasa de Cisneros (ikhulu le-1474) kanye neCasa de la Villa (ngekhulu le-XNUMX). Ngekhulu le-XNUMX, iPlaza yamukela igama layo lamanje, kwaqondana nokunikezwa kwesihloko seNoble neLoyal Villa esamukelwa yiMadrid, ezandleni zeNkosi u-Enrique IV waseCastile (XNUMX-XNUMX).
Indawo yaseSan Isidro
Leli paki liyisikhungo somgubho kwazise nayi ingqungquthela kasanta ohlonishwayo ngesikhathi semikhosi. Ngaphezu kohambo lwendabuko kanye nolayini abade bokuphuza amanzi ayisimangaliso avela ku-hermitage, kukhona futhi nendawo enkulu yokudlalela enamadokodo okudla nezindawo ezikhangayo. Abantu abaningi abavela eMadrid babuthana kule paki esendaweni yaseCarabanchel ukuze babe namapikiniki nomndeni nabangane, besebenzisa isimo sezulu esihle ngalezi zinsuku.
Ngaphambi kokuba iMadrid ibe yinhlokodolobha yesimanje, ukwakheka kwemigwaqo yayo kwakuphakathi nendawo nemigwaqo emincane, emincane nemigwaqo ephasishi. Lesi sikwele esiphakathi nendawo siyinhliziyo yeMadrid de los Austrias nengxenye yakudala yedolobha.
IMeya yePlaza yaqala ukwakhiwa esizeni sePlaza del Arrabal yakudala, lapho imakethe edume kakhulu edolobheni yayikhona ngasekupheleni kwekhulu le-1617. Ngo-XNUMX, umdwebi wamapulani uJuan Gómez de Mora wathunywa ukuba asungule ukufana ezakhiweni ezikule ndawo, okwase kungamakhulu eminyaka kusingathwa izenzo ezithandwayo, ukulwa kwezinkunzi, ukushaywa nokugcotshwa, phakathi kweminye imicimbi.
Ngesikhathi seSan Isidro, iMeya yasePlaza iba yindawo yamaculo esintu kanye nomculo wesimanje kwazise uhlelo luba nesikhala somculo we-pop ngomkhosi wePrimavera Pop wesiteshi iLos40.
Izinhlelo ezihamba phambili ze-avant-garde zigxilwe kule ndawo., kude ne-chotis yendabuko nama-zarzuela. Ama-Rock Villa Awards aseMadrid, itiyetha lezingane kanye nemihlangano yokufundisa ngokuzimela avelele.
Ngesikhathi seSan Isidro, iParque del Buen Retiro ihlobisa ubusuku bayo ngemibala eminingi, umculo namalambu. Ngempelasonto yemigubho, ichibi laso elidumile yindawo yokubonisa iziqhumane ezivumelaniswe nomculo futhi ziboniswa emanzini.Ngaphandle kokungabaza, elinye lamasu amahle kakhulu emikhosi yaseSan Isidro. Emini, amakhonsathi e-band nawo abanjelwa eBandstand.
IPlaza Monumental de Las Ventas isingatha ngenyanga kaMeyi lokho okubhekwa njengomunye wemicimbi ehlonishwa kakhulu yokulwa nezinkunzi eSpain. Kule poster kunabalweli bezinkunzi abavelele kunabo bonke enkundleni yezwe kuze kube lapha, ngaphezu kwabalandeli abangaziwa, abalingiswa bezepolitiki, amasiko kanye nomphakathi ophakeme waseMadrid abawujabulelayo lo mbukiso bahlala beza.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Izindawo eziyisikhombisa ezibalulekile eSan Isidro